Igbo, Romans, Lesson 010 -- The Wrath of God against the Nations is Revealed (Romans 1:18-32) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 010 (The Wrath of God against the Nations)
NDI ROM 1:18-21
18 N’ihi na esi n’eluigwe kpughee iwe nke Chineke megide asọpụrụghị Chineke na ajọ omume nile nke mmadụ, ndị na-egbochi eziokwu n’eme ajọ omume, 19 n’ihi na ihe enwere ike ịmara banyere Chineke pụtara ìhè n’ime ha, n’ihi na Chineke gosiri ha ya. 20 N’ihi na ebe ihe uwa di n’egosiputa ihe omume Ya nke anaghi ahu anya, ebe an’aghota ya site n’ihe nile emere, ya na ike ebighebi ya na Chi ya, nke mere na ha enweghi ngọpu, 21 n’ihi na, n’agbanyeghi na ha maara Chukwu, ha enyeghi otuto. Ya onwe ya dika Chineke, enwegh kwa ekele, kama oghuru ihe n'echiche ha, obi ha nke b wereagwara ab werea ah werea gbara ọchịchịrị.
Mgbe Pol kelechara ndị ụka Rom na nwayọ, ịhụnanya, na agụụ, na-emesiri ha isi okwu nke Oziọma ahụ, nke ahụ bụ ezi omume nke Chineke n’ime Kraịst, ọ malitere akụkụ mbụ nke nchọpụta miri emi. O kpughere na iwe ezi omume nke Chineke na-agbadata megide omume ọjọọ anyị niile n’ebe Chineke nọ yana ajọ omume n’ebe ndị mmadụ nọ. Taa, anyị na-ebi ọ bụghị naanị n’oge amara, kamakwa n’oge nke iwe Chineke, nke bụ ebumnobi na ihe omimi nke ụbọchị anyị. Esịt Abasi ke mbubiam ido mme owo ye usiene enye ke mme idiọkn̄kpọ mmọ edi idiọn̄ọ eyo nnyịn. Onye obula mara Onye Nsọ n’egwu ya egwu ma kuo ya iwe. Onweghi onye mara onwe ya ruo mgbe ọ matara ntakịrị ihe ụzarị nke ịdị nsọ nke Onye Nsọ. Nmebi iwu nke mmadu putara idi nma nke Chi.
Chineke kere ụmụ mmadụ n’onyinyo ya, mana ha, jiri mpako ọjọọ ha, were nzuzu họrọ inwere onwe ya n’ebe ọ nọ. Agbanyeghị, na ndidi ya, o bibighị ndị ogbenye na ndị na-enupụ isi, kama na-atụ anya na ha ga-echigharịkwute ya, ma nyefee ya ozugbo. Ma ha huru onwe-ha n’anya kari Chineke, ma nọ n’ebe di anya n’ebe ọ nọ, rue mgbe ha kpuru ìsì n’ụzọ ime mmụọ. Ha anabataghi ebube nke Onye Nsọ, kama ha gara n'ihu n'ime ihe ọjọ, na-emerụ onwe ha, na-egbochi ndị ọzọ ịnweta nzọpụta, na-ekwusi ike na ugha ha na nrụrụ aka ha bụ ụzọ ziri ezi.
Nmehie ọ daba na mmehie, madụ ka nwere ike ịmata ịdị adị nke Chineke site n'ọdịdị ebube ndị dị na okike. Mụọ usoro ihe ọkụkụ, ike nke atọm na ịdị ukwuu nke kpakpando na-enweghị atụ, ị ga-efekwa Onye Okike, n'ihi na ọ nwere amamihe, pụrụ ime ihe niile, na mgbe ebighị ebi. Gi na-amata ịma mma nke mkpụrụ obi gị, uche nke akọ na uche gị, na ihe ichepụta uche gị? Gi na - ege ntisa obi gị, nke na - egbu otu narị puku ugboro kwa ụbọchị, iji weta ọbara n'akụkụ ahụ gị niile? Ihe ịtụnanya ndị a abụghị nke akpaghị aka, kama ọ bụ onyinye Onye Okike nyere gị.
Nye n’ime anyị ga-ada ada n ’ụjọ na ịma jijiji mgbe anyị hụrụ ebube Chineke n’okike? Ihe akaebe banyere ebube ya na-ekwu okwu n’akwụsịghị akwụsị. Nwoke oge gboo n’agba, enweghi oge zuru oke igu ghe oghe nke okike, nke aka Chineke dere.
Onye, onye ghara inye Onye Okike otuto, na-ekele ya maka ihe o mere ma na-edo onwe ya n’okpuru ya, na-agho nzuzu. O tufue amamihe nke Mmuo Nso, kpuo ìsì n’uche ya, na dika anumanu. Ya mere, nwanne m nwoke, jiri ịhụnanya na egwu too Chineke, n'ihi na o kere gị n'onyinyo ya, kuo ume ndụ n'ime gị. Ọ bụ gị nwe ya, ị gaghị adị ndụ na-enweghị ya.
Mmadu niile n’emeghi ife Chineke bu ndi furu efu, ndị mmehie, na ndị ekweghị ekwe. Ike adịkwaghị n’etiti ike ha na ume ha, na-ebelata akọnuche ha, ma mee ka uche ha gbaa ọchịchịrị. Ha na-atụle ịgha ụgha n'echiche ha dị ka eziokwu, na-agbagọ ihe ọmụma Chineke, ma na-emesi ya ike. Yabụ, rịọ Onye-nwe gị maka okwukwe dị ndụ, ma duzie ndị ọzọ ikwere na ịdị adị nke Chineke, n’ihi na n’enweghị ntụkwasị obi n’ebube ya, na inye otuto ya, mmadụ na-ala n’iwe Chineke, nke ekpughere megide ha.
EKPERE: O nsọ Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, anyị na-ekele gị maka na i mere ka anyị dịrị, ma mee ka anyị nọrọ n'ụdị kacha mma. Gbaghara anyị oke anyị na nleghara anya anyị ji eto gị. Nyere anyị aka ichigharịkwute gị, kwupụta ịdị adị gị n'ihu ọha, na-aga n'ihu n'ịhụnanya gị kwa ụbọchị, na-enye gị otuto n'oge niile, ma kwuwaa iwe gị megide asọpụrụghị Chineke na ajọ omume niile nke mmadụ, ka ha chegharịa wee chigharịkwute gị.
Page last modified on January 25, 2021, at 08:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)